Aorus Z370 Motherboard က ဘာလို့ PC ဆင်မယ့်သူတွေအကြိုက်ဖြစ်နေသလဲ? – MyTech Myanmar
Aorus Z370 Motherboard က ဘာလို့ PC ဆင်မယ့်သူတွေအကြိုက်ဖြစ်နေသလဲ?
Gigabyte ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Motherboard တွေ၊ Graphic Card တွေကို ရောင်းချနေပြီး အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Intel ကနေလည်း 8th Generation Processor တွေကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် PC ဆင်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ အခုလို Latest Generation Processor နဲ့ ကွန်ပျူတာဆင်တော့မယ်ဆိုရင် Motherboard တွေကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Brand ကိုပဲ ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ Gigabyte ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Aorus Z370 Series Motherboard တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အခု Gigabyte ရဲ့ Aorus Z370 Series Motherboard တွေက Gamer တွေအပြင် ကွန်ပျူတာကို အမြဲတမ်းသုံးနေဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးသော Features တွေအပြည့်ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Gamer တွေအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ Features တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Gigabyte ကတော့ အခု Aorus Series Motherboard တွေကို အဓိက ၄ မျိုးနဲ့ အာရုံစိုက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Performance ၊ Gaming ၊ Style နဲ့ Durability ဆိုပြီး ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Performance အနေနဲ့ကတော့ Intel 8th Generation Processor တွေအတွက် အဓိကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Turbo B-Clock Feature ၊ 4133Mhz Speed အထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ DDR4 Memory ၊ M.2 PCI-E SSD Slot ၃ ခုပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gaming Features တွေအနေနဲ့ကတော့ DDR4 Memory ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတော့ Memory Speed အနေနဲ့လည်း 4133Mhz အထိကို ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Graphic Card ၂ ကဒ်နဲ့အထက် အသုံးပြုမယ့်သူတွေအတွက် High-Bandwidth (HB) SLI Bridge ကို ပါထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။ Audio ပိုင်းအတွက်လည်း ESS Sabre DAC ပါဝင်မှာပါ။ Creative Soundblaster 720 Software ကလည်း အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနေမှာပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Gamer တွေက PC တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မြင်ရအောင် Window ပါဝင်တဲ့ PC Casing တွေကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း Gigabyte ရဲ့ Aorus Z370 Series Motherboard တွေမှာ ကြိုက်သလိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ RGB Lighting စနစ်လည်းပါဝင်ဦးမှာပါ။
အဲ့တော့ အခုအချိန်မှာ Intel 8th Generation Processor တွေနဲ့ PC ဆင်တော့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Gigabyte Aorus Z370 Motherboard တွေကို သုံးလိုက်ရအောင်လား…
MyTech Myanmar2018-04-14T09:43:42+06:30March 29th, 2018|Computers, Games|